China Tungsten Carbide aro aka uwe maka mgbapụta rụpụta na Factory | N & D Na-eme Ihe
Tungsten Carbide aro aka uwe maka mgbapụta
Tungsten Carbide - Cemented tungsten carbides sitere na pasent dị elu nke ngwongwo carbide tungsten jikọtara ọnụ site na ígwè ductile. Ihe ejikọtara ọnụ maka bushings bụ nickel na cobalt. Ihe ndị na-esi na ya pụta na-adabere na matrik tungsten na pasent nke nragide (ihe dịka 6 ka 15% site na ibu kwa olu).
Enwere ike pịa ya ma mee ya ka ọ bụrụ nke ahaziri, enwere ike jiri ya mee ihe n'ụzọ ziri ezi, ma nwee ike ịgbanye ya ma ọ bụ jigide ya na ọla ndị ọzọ. Iche iche iche na akara ule nke carbide nwere ike e mere dị ka chọrọ maka ojiji na ngwa zubere, gụnyere chemical ụlọ ọrụ, mmanụ & gas na mmiri dị ka Ngwuputa na ọnwụ ngwaọrụ, ebu na-anwụ, na-eyi akụkụ, wdg
Dabere na ngwa dị iche iche nke ndị ọrụ, a na-eme tungsten carbide bushes nke akara ule tungsten carbide. Isi usoro abụọ nke tungsten carbide ọkwa bụ usoro YG (cobalt) na usoro YN (Nickel). N'ikwu okwu n'ozuzu, YG usoro tungsten carbide bushes nwere nnukwu ike mgbapu, ebe YN usoro tungsten carbide ohia na-eguzogide mmebi karịa nke mbụ.
Tungsten carbide shaft aka uwe na-egosi elu ekweghị ekwe na transverse mgbapu ike, na o nwere arụmọrụ ka mma na iguzogide abrasion na corrosion, nke na-enyere ya aka iji ya n'ọtụtụ ebe.
The tungsten carbide aro aka uwe ga-eji tumadi maka adiana support, kwado, mgbochi-aka na akara nke axle nke moto, centrifuge, n'echebe na separator nke submerged electric mgbapụta na oghom na-arụ ọrụ ọnọdụ nke elu na-agba n'usoro, ájá adịghị mma abrasion na gas corrosion na mmanụ ubi, dị ka slide amị aka uwe, moto axle uwe na akara axle uwe.
Nke gara aga: Ebube Tungsten Carbide
Osote: Tungsten Carbide Iburu Bush
Carbide Iburu uwe
Carbide Valve Uwe
Carbide eyi Part Aka uwe
Uwe Carbide Wear
Ciment Carbide Aka uwe
Tungsten Carbide Axle Aka uwe
Aka uwe Tungsten Carbide
Tungsten Carbide eyi yiri mgbaaka maka Oil na Gas Ind ...
Tungsten Carbide Gbasara Disk